Tuyển Tập Thơ Xuân Hay Nhất Của Ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu | Anybook.vn - Anybook
Tuyển Tập Thơ Xuân Hay Nhất Của Ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu | Anybook.vn
Fantatry ny rehetra i Xuan Dieu miaraka amin’ny tononkalony momba ny fitiavana izay tena mihetsiketsika amin’ny fihetseham-po sy tena tantaram-pitiavana. Miaraka amin’ny tononkalo feno fitiavana sy feno fitiavana, ny tononkalony dia “zaridaina manafosafo”, “fiainana feno safosafo”, “rahona sy rivotra”. Toy izany koa, angamba tsy an-kanavaka, i Xuan Dieu dia tohina ny lohataona mihoatra ny indray mandeha ary nanome tononkalo mahafinaritra io vanim-potoana maitso io. Ary aorian’ny tononkalo tsara indrindra nataon’i Xuan Dieu, indreto ny tononkalon’ny lohataonan’ny poeta Xuan Dieu – ny tononkalony lohataona tsara indrindra, azafady mba jereo ny tononkalon’ny lohataona tena kanto.
Masoandro kely, zavona manify kely,
Sampana maitso vitsivitsy, dimy loko fito tia fitiavana
Koa lohataona. Tsy mangataka be aho.
Efa ato am-poko ny lohataona.
Tsy lohataona telo volana fotsiny ny lohataona;
Ny lohataona dia rehefa miposaka sendra ny masoandro,
Manokatra ny vavany ny vorona eny amin’ny sampana ka mihira tononkalo;
Lohataona no fotoana hahatongavan’ny rivotra tsy nampoizina.
Niverina tampoka ny ririnina mangatsiaka indray andro,
Manidina ny rahona hanambara lanitra
Koa lohataona. Mafana kely ihany ny andro,
Toy ny mitana tanana tanora…
Lohataona eo afovoan’ny ririnina rehefa miposaka ny masoandro;
Amin’ny tapaky ny fahavaratra rehefa manga ny orana;
Amin’ny tapaky ny fararano rehefa mitsoka ny rivotra maraina
Mihodikodina miloko kisendrasendra amin’ny lobaka malalaka.
Raha tsy mianjera ny ravina maty eo amin’ny rantsan-kazo,
Fa ny voninkazo dia mena mamiratra loatra amin’ny andro mahazatra;
Raha any amin’ny zaridaina rehetra dia mamoaka hanitra tampoka ny hazo longan,
Io lohataona io. Inona no andrasako?
Vao mangiran-dratsy, isaky ny mampanantena ny fitiavana,
Lohataona, lohataona mandrakizay ao am-ponay
Rehefa mihaona eny ampovoan-dalana
Ajanòny ny masonao, hifanakalo hehy, ho very hevitra.
Ny rà no manambara fa efa mamony ny fo
Indray mandeha, na dia efa imbetsaka aza.
Io ilay fanahy miparitaka manerana ny habakabaka
Hanarato ody vaovao?
Ireo no elatra izay mihetsika moramora ao am-po
Toa mahafinaritra be ny mandre…
Taratasy mampahatahotra no raisina an-tanana;
Manako lava io feo io
Indray maraina, nanako tampoka ny fo…
Raha mbola mamiratra ny lanitra, dia mitempo ny foko,
Koa lohataona. Ha ampy ny vorona, voninkazo?
Mitantara ny vanim-potoana, ny toetrandro, ny taona voninkazo,
Tsy misy taona ny fitiavana, ary tsy misy daty ny lohataona.
Tiako tsy hiposaka intsony ny masoandro
Aoka tsy ho levona ny loko;
Te hamatotra ny rivotra aho
Aoka tsy hanidina ny ditin-kazo manitra.
Toho-tantely ity lolo eto;
Indro ny voniny eny an-tsaha;
Indro, ny ravin’ny sampany dia misafosafo;
Ny amin’ny akanin’ity rahalahy ity dia hiran’ny fitiavana.
Ary indro, ny hazavana mamiratra amin’ ny karavasy;
Isa-maraina, ny andriamanitry ny fifaliana mandondona eo am-baravarana;
Ny volana Janoary dia matsiro toy ny molotra akaiky;
Faly aho. Fa maika kely:
Tsy miandry ny fiverenan’ny masoandro amin’ny lohataona aho.
Tonga ny lohataona, midika izany fa mandalo ny lohataona,
Ny lohataona dia tanora, izany hoe ny lohataona dia ho antitra,
Ary tapitra ny lohataona, izany hoe maty koa aho.
Malalaka ny foko fa an-danitra mafy,
Aza lava ny fahatanorana amin’izao tontolo izao,
Ahoana no hilazako fa mbola mandeha ny lohataona,
Raha tonga indray ianao dia tsy hahita anao indray.
Mbola misy ny lanitra sy ny tany, fa izaho tsy eo intsony,
Ka dia manenina amin’izao tontolo izao aho;
Ny fofon’ny volana sy taona dia feno fizarazarana embryon,
Manerana ny renirano sy ny tendrombohitra dia mbola manao veloma mangina…
Ny rivotra tsara tarehy mibitsibitsika amin’ny ravina maitso,
Tezitra ve ianao satria tsy maintsy manidina?
Nitsahatra tampoka ny fihirana ilay vorona mitabataba,
Matahotra ny loza mananontanona ve ianao?
Sanatria, ô! Tsy mbola…
READ Thơ Hay Về Thể Dục Thể Thao ❤️️ Chế Vui Hài Hước Nhất | Anybook.vn
Te handeha! Tsy mbola tapitra ny vanim-potoana,
Manomboka mamony ny fiainam-baovao manontolo;
Tiako hihetsika ny rahona sy hitsoka ny rivotra,
Te-hanamamo lolo amin’ny fitiavana aho,
Te hanangona ao anaty oroka iray be dia be aho
Ary ny rano sy ny hazo sy ny ahitra,
Aoka ho hanitra, aoka ho feno hazavana
Afa-po ny bar ny loko vaovao;
– Ry lohataona mena, te hanaikitra anao aho!
Ny raviny tanora dia matsiro toy ny mihinana.
Nijanona ny andro, fa ny raviny vaovao dia lena toy ny orana.
Mbola mikasika ny tampon’ny ravina manga ny resin’ny voromahery mena;
Nikoropaka ny rivotra ary mbola vitsy ny raviny.
Andian-kazo tanora voromahery
Ny fahafantarana fa milalao ny rivotra dia milalao bebe kokoa ny hazo.
Ny tsipìka mahafaly manindrona ny rivotra,
Sampana mihozongozona miaraka amin’ny ravina maitso.
Mandeha antoandro aho, mandeha eo afovoany
Ny andro voalohany amin`ny lohataona – mandeha eo afovoan`ny fivoriana voalohany
Toy izao vao nisokatra ny fiainana maraina.
Ary ny hazo tany am-boalohany miaraka amin’ny rivotra mihomehy tsara.
Eo afovoan’ny zaridaina, ny feon’ny vorona falifaly
Mijery ny taratry ny masoandro ilay tovovavy
Nahoana no mamy ny fiandohan’ny lohataona!
Raozy felany misy tsiky mamirapiratra
Ny hazavana dia mamihina ny tampony avo
Hazo mavo mifofofofo amin’ny masoandro
Mitsoka tsy mitanila ny rivotra mamerovero
Ento manakaiky ny sampana paiso ny sampana apricot
Ny volom-borona maitso dia tena tsara tarehy
Ny lokon’ny voninkazo dia vaovao toy ny miantso
Inona no manafosafo ny rivotra
Toy ny hanitry ny fitiavana tsindraindray
Sambany nihaino ilay tovovavy
Mihira mangina ny mozika
Ny lohataona dia masaka eo amin’ny takolany
Ataovy mavesatra ny fon’ny olona iray…
Niandry olona tamim-pahoriana ilay tovovavy
Tsy nanao fotoana mihitsy – teo antenatenan’ny lohataona
Miaraka amin’io tovolahy lavitra io
Tovovavy manao ody, mijoro mitsiky
Tonga amin’ny fihiran’ny vorona ny lohataona,
Eo amin’ny rano manga ony, ao anaty lambam-paty.
Tsy mbola naka voninkazo homena anao
Dia sampana tononkalo noentiko vonjimaika.
Ny jiron’ny lohataona isa-maraina dia mavokely mamirapiratra,
Ny setroka avo no nahazo voalohany.
Nambolena hatramin’ny lanitra ny saha maitso
Taratra mamirapiratra mamirapiratra ao anaty rano.
Ka tononkalo nentiny vonjimaika.
Zavamaniry – tsy mamboly ho an’ny Tet isika –
Vao nitsimoka ny raviny voalohany.
Ny olona mandeha eny an-tsena dia maneno ny feon’ny tongony;
Ny pataloha vaovao manjelatra dia mbola mikoropaka.
READ Thơ Về Hoa Lan - Chùm Thơ Hay Viết Về Hoa Lan Kiêu Sa & Tinh Khiết | Anybook.vn
Any ambanivohitra dia mahita tsipika aho
Mihazakazaka toy ny faran’ny habakabaka
Ny vy dia atsangana toy ny kofehy vy
Mitarika herinaratra hanorina fahasambarana…
Te hanasa anao hanitsaka sambo aho,
Velona ny sambontsika
Mifototra amin’izany, mihamalalaka ny alina, mamirapiratra ny andro,
Hanamboatra angano ny sambontsika…
Ity misy tononkalo nentiko vonjimaika
Tahaka ny rano maitso amin’ny ony, tahaka ny lambam-paty…
Andro lohataona maitso toy ny maso manga,
Mitsoka ny ala ny rivotry ny Ranomasina Atsinanana.
Akanjo Viet Bac miloko indigo mafy
Nasiana peta-drindrina koa ny tsipika masoandro lehibe.
Mandeha amin’ny tsipika tapaka aho,
Henoy ny fanoherana mihira manjavozavo.
Mamony ny hanitry ny fandresena nafafy eny amin’ny rivotra,
Ny lalana mamakivaky ala sa ny lalana miverina aty an-drenivohitra ?
Mivoy ravina kely midina ny tafo,
Ny rivotra mitondra landy eny amin’ny faravodilanitra,
Tanora tanana manerana izao tontolo izao;
Avy aiza? Tany mitsingevana lahatsoratra mampihomehy.
Lasa ilay mpiambina nitana basy.
Ny soavalin’ny fifamoivoizana dia mitongilana ny lohany mba hihinana ahitra maitso.
Nilentika ny tetezana noho ny hazavan’ny rano.
Nijery ilay fivarotana landy tamin’ny maso manjelanjelatra ilay fivarotana.
Izay lavitra dia hihodidina mafy,
Mihira ao amin’ny Khu Muoi ny Renirano Lo.
Dai Tu Street na Cao Van tsy haiko!
Izaho dia Izaho, ary ianao koa dia Izaho.
Ny rà vaovao nikoriana nandritra ny telo taona mpiady,
Misy maraina vao maraina.
Ny tendan’ny vorona rehetra dia mikiakiaka
Ataovy misavoritaka ny masoandro.
Manga be ny lanitra! Firy ny hazo poetika!
Kintan’ny zaridaina tanora! Ohatrinona ny lalana ahitra.
Rehefa nihaona tamin’i Quynh Nhu i Pham Thai tamin’izany fotoana izany,
Raha vao nahita an’i Kieu i Kim.
Ry taona fahamaikana hiasa taloha!
Andriamanitra eto! Ary avereno eto
Ao amin’ny maso ny divay, ary raha mijery azy, dia andramana,
Atsoboka ao am-ponao ary rehefa mitsangana ianao dia miandry.
Ary mifofofofo eo ambanin’ny tongotra ny mozika mba hankalaza;
Ary ny tranon-kala amin’ny teny madinidinika dia mirehitra;
Ny hemline vaovao koa dia mamo amin’ny fofon’ny rivotra sy ny rano;
Ny volomaso lava mifofofofo amin’ny tara-masoandro mahafaly.
Masina tokoa, ny tolakandro tsy sahy miteny,
Saro-kenatra ny tanana, saro-kenatra ny loha;
Ny vorona eo afovoan’ny masoandro, ahoana no fitarainany?
Oh tsy manam-petra mandritra ny iray minitra mifampijery!
Omeo mena aho, omeo mena aho,
Miverena ary avereno loko ny rafitry ny fiainana…
Andriamanitra ô, aiza ny fahazazako?
Aiza ny andro, ry Andriamanitro ô! Andriamanitra ô!
Ny loko manjavona, ny hanitra hatsatra, ny lohataona!
Nizarazara sy nihomehy ireo tarehy mavokely.
Raiso ny bao, fa alaivo ny stamena,
Ry fanahy ô, ianao koa ny tany!
Ody manify manidina miaraka amin’ny alahelo,
Avelao aho hilatsaka voninkazo tsara tarehy.
Raha vao mandao ny hazo ny lolo,
Tsy nandre fitarainana ho an’ny tany.
READ Bóng Nàng Thiếu Nữ Tháng 5 | Anybook.vn
Na dia miketrona aza ny rivotra, dia etona ihany no mitsoka,
Na dia tsy milatsaka ranomaso aza ny ando, dia manenjika ny lanitra;
Fa ny haizin’ny hariva dia milatsaka haingana dia haingana,
Ary maivana ny voninkazo: elatra mianjera… mianjera…
Eo amin’ny tanimbary mivolombolamena, oran’ny vary,
Tamin’izay no ahitana antokon-kintana vitsivitsy ny kintana.
Ny andriamanitry ny fahafatesana dia mialoka ao amin’ny aloka maina,
Manomboka manangona fanahy manitra.
Ny andro alohan’ny andro faharoa amin’ny masoandro peach,
Nijery ahy izy te-hanontany hoe “nahoana?”
Rehefa tonga mitady molotra tsara tarehy aho
Tsiky fitiavana sy faniriana.
– Nahoana ny fihaonana voalohany,
Efa natao sesitany tany amin’ny tanin’ny fahoriana aho,
Tsy afaka mandalo tampoka eo anoloan’ny varavarana,
Fantatrao ve fa tsy feno fankasitrahana ny fihaonana? –
Izay mitondra hanitra
Na ny hiram-pirenena! tiako fotsiny,
Manaraka mangina fotsiny ny fikorianan’ny fihetseham-po
Toy ny sambo mpanjono very tao anaty zavona
Ahoana no hanazavana ny fitiavana!
Tsy misy dikany izany, tolakandro
Mitondra ny fanahiko amin’ny hazavan’ny masoandro izany,
Miaraka amin’ny rahona mazava, rivotra malefaka…
Azafady mba ho any amin’ny tanin’ny voaniho
Alefaso ao anaty rano ny tongotrao, mijoroa ho mamo,
Avelao aho ho any an’efitra
Mialà amin’ny fahavaratra pelaka; – tsara izany.
Dia handeha aho indray andro any.
Nahoana, iza no hilavo lefona?
Tena vendrana aho, tena vendrana
Ny mitia ihany no haiko, tsy azoko na inona na inona.
Manankarena be izahay, noho ny fifampiraharahana
Rehefa manomboka indray izao tontolo izao
Lanitra manga vaovao, bara rano manga
Toy ny zaridaina mamony vao maraina
Ny vonin’ny Areca dia namaky voninkazo ivoara
Ny hazavana sy ny hanitry ny voninkazo mamirapiratra
Te-hanome anao io fofona io aho
Mangatsiaka sy lalina
Toy ny sampana areca ny fitiavanay
Fonosy amin’ny herin’ny maizina ny zaridaina manontolo
Vorona mihobia sy mihira
Vao izao no tononkalon’ny lohataonan’i Xuan Dieu izay tiako halefa aminao, manantena fa tianao koa izy ireo. Misy tononkalo lehibe maro hafa amin’ny sokajy tononkalo ao amin’ny OCuaSo.Com, tsidiho ny katalaogin’ny tononkalo an’i Xuan Dieu raha te hahita bebe kokoa amin’ireo tononkalony lehibe hafa!
Isan’andro, mbola misy tononkalo fitiavana tsara, tononkalo fitiavana mampalahelo ary tononkalo fitiavana tantaram-pitiavana izay noforonina, nangonina ary navoaka tao amin’ny sokajy tononkalo ao amin’ny bilaogy OCuaSo.Com. Azafady tsidiho matetika mba hanavao haingana ny tononkalo tsara indrindra sy farany, manaova fotoana mahafinaritra amin’ny rima!
Hijery tononkalo Xuan Dieu na Boky tononkalo malaza sy tononkalo lohataona malaza indrindra miaraka amin’ny tononkalo lohataona vaovao noforonina
Tianao ve ilay lahatsoratra hoe “The Best Spring Poetry Collection of Mr. Hoang Poetry Xuan Dieu” ao amin’ny sokajy poezia tsy mety maty – Xuan Dieu (Ngo Xuan Dieu) ao amin’ny Window Blog? Raha tianao dia tsidiho matetika ny bilaogiko mba hamakiana ireo lahatsoratra farany ♡ !
Previous: Lễ tân ngoại giao là gì? Những điều bạn cần biết về lễ tân ngoại giao | Anybook.vn
Next: Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng | Anybook.vn